Gobolka Stavropol, aagga dhulka waraabka ah wuxuu ku kori doonaa 2024 jeer sanadka 2,5 - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Glavgosexpertiza ee Ruushka ayaa soo saartay ra'yi wanaagsan kadib natiijooyinka dib-u-tixgelinta naqshadeynta soo socota iyo dukumiintiyada qiyaasta ah ee dib-u-dhiska dhismaha dhismayaasha saldhigga bamka Mezhdurechye Kuban-Yegorlyk ee degmada Izobilnensky ee Tervropol Territory.
Saldhigga bamgareynta ee kaydka Novotroitskoye wuxuu siiyaa dadka isticmaala marin biyoodka kanaalka weyn ee Novoaleksandrovsky. Qaybta marin biyoodka saldhigga ee dibedda loo qorsheeyey dib-u-dhiska wuxuu shaqeynayay ilaa 1975. Hirgelinta mashruucan ayaa horumarin doonta tayada biyo siinta dadweynaha iyo kordhinta aagga dhul beereedka waraabka 8,8 kun hektar.
Mashruucu wuxuu bixinayaa bedel ahaan qaybo ka mid ah marin biyoodka oo dhererkiisu ka badan yahay 1 km. Kaamirooyinka indha indheynta ayaa laga dhisi doonaa waddooyinka iyo isgoysyada tareenka, iyo kaameradda mitirka socodka ee saldhigga laftiisa. Intaa waxaa dheer, qalabka waa la cusbooneysiin doonaa, dhismaha saldhigga dib ayaa loo dhisi doonaa. Ka dib bedelida qalabka bamgareynta, wax soo saarka nidaamka waraabka ayaa kor u kici doona.
Dib-u-dhiska, dib u habeynta farsamada iyo dhismaha nidaamyo cusub oo dib u soo celin ah oo ku saabsan dhulka gobolka ayaa lagu fuliyaa qaab-dhismeedka barnaamijka gobolka ee horumarinta beeraha, iyo sidoo kale barnaamijka waaxda "Horumarinta dhismaha dib-u-dhiska ee Ruushka." Shantii sano ee la soo dhaafay, beeraleyda gobolka, iyagoo ka wakiil ah Guddoomiyaha, waxay u xilsaareen 21 kun hektar oo waraab cusub ah oo qiimihiisu yahay 4 bilyan oo rubi. Iyada oo qayb ka ah tallaabooyinka taageerada gobolka ee hadda jira, kabista xaddiga in ka badan 2 bilyan oo rubi ayaa loo bixiyey ujeeddooyinkan, taas oo suurtogelisay in beeraleyda laga magdhabo kalabar kharashyada dhacay.
- Sannadkan waxaan qorsheyneynaa inaan kabno 5 kun oo hektar oo waraab cusub ah oo ay ku baxayso 800 milyan oo rubi. Iyada oo 426 milyan oo rubi ay ku jirto miisaaniyadda la mideeyay, sidii sanadkii hore, waxaan awoodi doonnaa inaan 50% ka bixinno kharashyada soo saarayaasha beeraha miisaaniyadda. Guud ahaan, marka la gaaro sanadka 2024 waxaan qorsheyneynaa inaan ku kordhinno aaggan 52 kun oo hektar oo kale oo wadartoodu tahay 10 bilyan oo rubles. Sidaa darteed, aagga waraabinta ee gobolka muddo siddeed sano ah illaa 2024 wuxuu ku kordhin doonaa 73 kun oo hektar, taas oo 2,5 jeer ka sarreysa aagga 2016, - ayuu yiri wasiir ku xigeenka beeraha ee Tervropol Territory Vyacheslav Dryiger.
Tags: Waraabkagobolka Stavropol
Sannadka 2021, soosaarayaasha dhirta ee qaybta Yurub ee Xiriirka Ruushka ayaa markale laga yaabaa inay u hanjabaan abaar
Sanadkii 2020, in ka badan 3300 tan oo baradho ah ayaa laga diray Bashkortostan oo loo diray dalalka Bartamaha Aasiya
Nidaamka Raadinta ee sunta cayayaanka iyo agrochemicals ayaa lagu horumarinayaa Ruushka